Madaxweynaha Puntland oo Kismaayo gaaray (dhegayso/sawiro) – Radio Daljir
Seteembar 2, 2018 2:29 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftigii uu hogaaminayey ayaa maanta gelinkii danbe 02 Sept 2018 gaadhay magaalada Kismaayo, halkaas oo ay kaga qayb gelidoonaan shirka wadatashiga Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Weftiga Madaxweynaha ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha Kismaayo kusoo dhoweeyey Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo ku-xigeenadiisa, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha maamulka Jubbaland, isimo, cuqaal, waxgarad, siyaasiyiin iyo shacab aad u tira badan.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa si wadajira salaam sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jubbaland, salaanta kadib Madaxweynaha Puntland ayaa shacabka iyo dawladda Jubbaland uga mahadnaqay soo dhoweynta ay u sameeyeen isaga iyo weftigiisa.
“Madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo shacabka reer Jubbaland-ba aad iyo aad ayaan idiinka mahadnaqaynaa soo dhoweynta wanaagsan walaaltinimadale, ehelnimada leh ee aad nagu soo dhoweyseen, sida wanaagsan ee qiirada leh ee naloo soo dhoweeyey aad ayaan ugu faraxsannahay waanna indiinka madnaqaynaa mar labaad” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
“Waxaan u nimid shirka Madasha wadatashiga Dowladdaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo looga wada hadlayo arrimaha masiiriga ah ee u gaarka ah, khuseeyana iskaashigooda iyo guud ahaan danta caam ka ah, waxaan rabnaa inaan helno dowlad goboleedyo mid ah, hadafkooduna yahay Soomaalinimo, hirgeliyana nidaamka fadaraaliisamka” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa dhankiisa kusoo dhoweeyey Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo weftiga Madaxweynaha Puntland , waxaana uu tilmaamay inay ku faraxsan yihiin imaanshahooda.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoosta ka xariiqay in shirku yahay mid lagu raadinayo qaranimo Soomaaliyeed, wadajir, wax wada qaybsi, xasilooni iyo walaaltinimo Soomaaliyeed.
Muuqaalka Bulshada ee Radio Daljir: Cudurka ‘Snapchat dysmorphia’ ee laga qaado baraha bulshada iyo aragtida dadweynaha (dhagayso)